နှာခေါင်းပေါက်ခြင်းကိစ္စ နှင့် ရှရီအီ အမြင်
မတျ ၇, ၂၀၁၅ - ၂:၀၈ ညနေ
မေး - အမျိုး သားဖြစ်စေ အမျိုးသမီး ဖြစ်စေ ၏ နှာခေါင်းကို(အလှအတွက်(သို့)အခြားရည်ရွယ်ချက်အတွက်) ဖောက်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ရှရီအီ ဥပဒေကို ဖော်ပြပေးပါ ခင်ဗျား ? အဖြေ - ဤလုပ်ရပ်သည် ၊မူလကိုယ်ပိုင်အနေအထားအရ ပြဿနာ မဟုတ်ချေ။သို့သော် အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အခြားအမျိုးသား နာမဲဟ်ရမ်(များ) အတွက် အလှတန်ဆာခြင်းအဖြစ် ပြူလုပ်မည်၊ ဝတ်ဆင်မည်(ဖောက်မည်) ၊ အမျိုးသားများ အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့်တူအောင် ဝတ်ဆင်မည် သို့မဟုတ် ကျေးယဉ်သိမ့်မွေ့မှုမရှိ သည့် အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုကို တိုးတက်ကျယ်ပြန့်အောင်ပြုလုပ်မည်ဆိုလျှင် (ဖောက်ခြင်း) မပိုင်ချေ။
သူနာပြု ဆရာမ မှ နာမဲဟ်ရမ် ကိုထိတွေ့ခြင်း
ဇနျနဝါရီ ၁၀, ၂၀၁၅ - ၁၂:၁၆ ညနေ
မေး - ကျွန်မ သူနာပြုဆရာမ တစ်ယောက်ပါ ။ ဆေးရုံး တရုံးမှာ အလုပ် လုပ်ပါတယ်။ နာမဲဟ်ရမ် ကို ကြည့်ရခြင်း နှင့် ၎င်း၏ ကိုယ်ခန္ဓာကို ထိတွေ့ရခြင်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှရီအီ အမိန့် မည်သို့ လာ ရှိပါ သနည်း ?
အိမ်ထောင်ပြုဖို့ မတတ်စွမ်း နိုင်၍ မိမိကိုယ့်ကို မြုံ အောင်ပြုလုပ် ခြင်း
ဇနျနဝါရီ ၉, ၂၀၁၅ - ၁၀:၀၀ နံနကျ
မေး - အကယ် မည်သည့် ယောက်ကျားသား တစ်ဦးတစ်ယောက်မဆို အိမ်ထောင်ပြုဖို့ မတတ်စွမ်း နိုင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ သူအနေဖြင့် မိမိ၏ ဘဝ တွင် အမြဲ အရှုံး နှင့်သာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်၊ယုတ်စွ အနိမ့် အမျိုးအစား အိမ်ထောင်ပြုဖို့ရန် ပင် မတတ်နိုင်ချေ။ အိမ်ထောင်ပြုမည် ဆိုလျှင် ၎င်း၏ ခန္ဓာကိုယ် တွင် တုန်လုပ်မှု ကို ဖြစ် စေပါတယ် ၊ဆေးစား၍ ၎င်း (သို့မဟုတ်) ခွဲစိတ်၍ ၎င်း မိမိကိုယ့်ကို မြုံ အောင် ပြုနိုင်ပါသလား ?
တိရစ္ဆာန်များ မွေးခြင်းဆိုင်ရာ ရှရီအီ ဥပဒေ
ဇနျနဝါရီ ၉, ၂၀၁၅ - ၅:၃၉ နံနကျ
မေး - တိရစ္ဆာန်များ မမွေးရဟုဆိုပြီး တားမြစ်ချက်ရှိပါသလား ? အကယ်၍ တားမြစ်ချက်မရှိလျင်အလှအပ အတွက် ၎င်း (သို့မဟုတ်) သာယာသည့် အသံ နားထောင်ရန် အတွက် ၎င်း (ဥပမာ အားဖြင့် စာဝါဌက် ၊(သို့မဟုတ်) အစိမ်းရောင် ကြက်တူရွေးငယ်စသည် ဖြင့် ကိုမွေးခြင်း ) ၎င်းတိရစ္ဆာန် များကို အိမ်မှာ မွေးလို့ရပါသလား ? ရှရီအီ အမိန့် ဘယ်လို ရှိပါသလဲ ?
အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် မှ အပ အကူ အညီတောင်း ခံခြင်း သည် ရှေးရ်က် ဖြစ်ပါ သလား?
ဒီဇငျဘာ ၂၂, ၂၀၁၄ - ၂:၅၁ နံနကျ
အသိဥာဏ်နှင့်ဝဟီ၏ဒဿနအမြင်၌လူသားအားလုံးတစ်နည်းဆိုရလျှင်အားလုံးသောတည်ရှိနေသောအရာများအားလုံးသည်၊ တည်ရှိမှုအဆင့်အထိ ရောက်ရန်အထိအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်လိုအပ်ပါသည်။မိမိတို့၏အာနိသင်အားအခြားအရာများသက်ရောက်ရန်အတွက် လည်းအရှင်မြတ်အားလိုလားတောင့်တရပေသည်။ ဆက်လက်ပြီး အောက်ပါအတိုင်းလေ့လာ နိုင်ပါသည်။
ရှဖာ အတ်ပြု ပိုင်ခွင့် ရှိသူများ ထံမှ ရှဖာအတ် အတွက် တောင်းခံ ခြင်း သည် ရှေးရ်က်ဖြစ်ပါသလော?
ဒီဇငျဘာ ၂၂, ၂၀၁၄ - ၂:၄၂ နံနကျ
ဤမေးခွန်းအတွက်ပိုပြီးရှင်းပြရလျှင်ရှဖာအတ်ပြုပိုင်ခွင့်သည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်တစ်ပါးတည်းသာပြုပိုင်ခွင့်ရှိပေသည်။ထိုအတွက်ကြောင့်ကျမ်း တော်မြတ်ကုရ်အာန်အနေဖြင့်ဤအကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီးမိန့်ကြားတော်မူ သည်မှာ- قُلْ لِلّہِ الشَّفَاعَةُ جَمِیعًا အဓိပ္ပာယ်-အသင်ပြောကြားပါလေ။ဧကန်မုချရှဖာအတ်တောင်းခံခြင်း သည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ဟက်ကေမိုသလသ်(အခွင့်အပြည့်အဝ)ကို၎င်း၏ဗန်ဒ္ဒာဟ်ထံမှတောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ဤကဲ့သို့သော်တောင်းခံမှုသည်အမှန်တကယ်အလ္လာဟ်မဟုတ်သူများကိုကိုးကွယ်ခြင်းသာဖြစ်ပေသည်။ထို့အ ပြင်(သောင်ဟီးဒေအေဗာသီ-توحید عبادی)၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပေသည်။
နမာဇ် နှစ်ခုအား တစ်ချိန်တည်း၌ ပေါင်းဖတ်ခြင်း။
နိုဝငျဘာ ၂၂, ၂၀၁၄ - ၅:၀၄ နံနကျ
နမာဇ်သည်အဖန်ဆင်းခံနှင့်ဖန်ဆင်းရှင်အကြားအရေးအကြီးဆုံးဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ပြုစုပျိုးထောင်ပဲ့ထိန်းဖို့အကောင်းဆုံးဝစီလာ၊မိမိကိုယ်စမ်းစစ်ပြုပြင်ဖို့၊မိမိကိုယ်တည်ဆောက်ဖို့အကောင်းဆုံးအကူအညီ၊မကောင်းမှုများမှတားမြစ်ပေးသောအရာ၊အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့်အနီးကပ်ဆုံး ဖြစ် အောင်ပြုလုပ်ပေးသောအရာဖြစ်ပေသည်။နမာဇ်ဇေဂျမာအတ်သည်မွတ်စလင်များအားအင်အား၊စု စည်း၊စည်း လုံးမှုနှင့်၊ဘဝအတွက်နိုးကြွတက်ကြွမှုကိုဖြစ်စေပါသည်။ နမာဇ်သည်တစ်နေ့တာဝတ်ပြုရာ၌(၅)ကြိမ်ဖြစ်ပြီး၊မနုဿလူသား၏နှလုံးသားနှင့်ဝိညဉ်အားသန့်စင်အောင်ပြုပေးသောအရာသည်လည်း“မကုန်မခမ်းနိုင်သောအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ကျေးဇူးတော်၏ပင်မ” နမာဇ်ဖြစ်ပေသည်။
မြေခဲပေါ် စဂ်ျသာ ပြုခြင်း။
နိုဝငျဘာ ၂၂, ၂၀၁၄ - ၄:၃၉ နံနကျ
အေဗာသသ်ပြုရာတွင်စဂ်ျသာ၏အရေးပါမှု အစ္စလာမ်အမြင်အရအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်အတွက်စဂ်ျသာပြုလုပ် ခြင်းသည်အရေးအကြီးဆုံးအေဗာဒသ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊အရေးကြီးဆုံးအေဗာဒသ်များမှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သာဓကအားဖြင့်ရီဝါယသ်တော်များ၌လူသားသည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့်အနီးကပ်ဆုံးအချိန်သည်စဂ်ျသာပြုလုပ်နေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်ဟုပါရှိပေသည်။သာသနာ့အကြီးအကဲများအထူးသဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)နှင့်အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)တို့သည်စဂ်ျသာကြာမြင့်စွာပြုခဲ့ပေသည်။
မိုသာ(ခ) ယာယီ နေကာဟ်
နိုဝငျဘာ ၂၂, ၂၀၁၄ - ၄:၃၁ နံနကျ
မိုသာ(ခ)ယာယီနေကာဟ် အသေအချာ မသိသေးသူများ အလွဲသုံးစားလုပ်နေသူများ လေ့လာ ထားသင့် ပါသည်။
စကျတငျဘာ ၂၂, ၂၀၁၄ - ၁၀:၃၆ ညနေ
အံ့ဩစရာ အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ)၏နောက်လိုက်(ရှီအာ)များအနေဖြင့်ကအ်ဗာ ကျောင်းတော်သို့ဟဂ်ျပြုဖို့သွားရောက်သည့်အခါအဟ်လေဘိုက်(အ.စ)၏သွန်သင်ချက်အရစဝါဗ်ရရန်အလို့ငှာမက်စ်ဂျစ်ဒွလ်နဘီ၌စည်းလုံးရေးကိုဦးထိပ်ထားပြီးစွန်နီ နမာဇ်ဇေဂျမာအတ်၌ ဝင်ရောက်ဖတ်ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင်ရှီအာများကိုအံ့အားသင့်စေသောအရာသည်ရှေ့ဆောင် ဆရာသည် လုံးဝ၊ بسم الله الرحمن الرحيم ကိုစူရာဟ်ဟမ်ဒ်အစ၌မဖတ် ချေ။(သို့)တိုးတိုးလေး(သို့)ဖုန်းကွယ်ပြီး၊ဖတ်လေ၏။ရုတ်စွအဆုံးအသံထုတ်ဖတ်ရ မည် နမာဇ်(ဥပမာ)မဂရစ်၊အေရှာ၊ဖဂျရ်၌ပင်အသံမထုတ်ချေ။ အမှန်တကယ်မက္ကာဟ်ရွှေမြို့တော်၌ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောကျမ်းမြတ်ကုရ် အာန်အတွင်းစူရာဟ်ဟမ်ဒ်၏အာယတ်တော်(၇)ခုပြဆိုထားပြီး بسم الله الرحمن الرحيم သည်ပထမဦးဆုံးအာယတ်အဖြစ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ဤအတွက်ကြောင့်အားလုံးအံ့အားသင့်စရာပင်ဖြစ်နေသည်။ကျမ်းတော် မြတ်ကုရ်အာန်၏အရေးအကြီးဆုံးအာယတ်တော်အားမေ့ထားကြ ကုန်သနည်း? ကျွန်ုပ်တို့(ရှီအာ)အားဗစ်မေလ်လ္လာဟ်နှင့်ပက်သက်၍မေးမြန်းလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်၎င်းအဟ်လေစွန္နတ်၏ရီဝါယတ်တော်များ၊အဖြစ်အပျက်သမိုင်းများကိုတင်ပြလျှင်အံ့ဩကြပေသည်။ ဒီအတွက်ကြောင့်ပိုမို၍သင့်တော်သည်ကားပထမဦးဆုံးအဟ်လေ စွန္နတ်ဓမ္မသတ်ပညာရှင်များ၏လက်ရှိ“ဖသ်ဝါ”ဖြစ်သည်။ထို့နောက်ဤကိစ္စနှင့်ဆိုင်သောရီဝါယတ်တော်များကိုတင်ပြပါမည်။ ခြုံငုံပြောရလျှင်အဟ်လေစွန္နတ်ဓမ္မသတ်ပညာရှင်များသည်အဖွဲ့(၃)ဖွဲ့ရှိပါ သည်။ ၁။အေမာမ်ရှာဖေအီးနှင့်၎င်းနောက်လိုက်များသည်ဗစ်မေလ်လ္လာဟ်စူရာဟ်ဟမ်ဒ်၏အစဖြစ်ပြီး၊နမာဇ်၌ဖတ်ကိုဖတ်ရပေမည်။အကယ်၍နမာဇ်ကိုဇဟိုရ် နှင့်အစဲရ် ဖြစ်ပါက တိုးတိုးဖတ်ရမည်။ နမာဇ်(ဖဂျရ်၊မဂရစ်၊အေရှာ)၌ အသံကိုထုတ်၍ ဖတ်ရမည်ဟုခံယူထားပေသည်။ဆက်လက် လေ့လာကြည့်ပါစို့ ...
အဘယ်ကြောင့် ရှီအာများ အနေဖြင့် ခေလာဖသ် အား သန်စီစီး ဟု ခံယူ ထားပါ သနည်း?
ဒီဇငျဘာ ၁၄, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဟဇရတ်(သ) အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၏ အေစ်သေဖ်သာအ်
နမာဇ် နှစ်ခု ကို ပေါင်းပြီး ဖတ်တာ မှန်ရဲ့လား ?
ဇေနာ (ခ) ကာမေသု မိစ္ဆာစာရကံ ကျူးလွန်မှု ၏ ပြစ်ဒဏ် ရဂ်ျမ်(ခ) ခဲဖြင့်ပေါက်သတ်ခြင်း
အေမာမ်ဟိုစိုင်း (န) (အ.စ) အနေဖြင့် ရှဟာဒတ်(သ) ဖြစ်မည် ဆိုတာ သိလျက် အဘယ်ကြောင့် ကရ်ဗာလာသို့ ကြွမြန်း သွားရပါသနည်း ?
မုတ်ဆိတ်ထာခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီးလက်ရှိကမ္ဘာ့ရှီအာအများစုသက္က်လီးဒ်လုပ်နေရတဲ့ဖိုက္ကဟာငါးပါး၏ အဟ်ကမ်းအမေးအဖြေရုံး(ကွမ်း)ကိုဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပြီးအဖြေများကိုအောက်ပါ အတိုင်းဖြေပေးခဲ့ပါသည်။
ဗေဒ်အတ် ဆိုသည်မှာ ???
msm site တွက်မကြာသေမီ အချိန် က စလင်ဆိုသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ သံသယဖြစ်ဖွယ်မေးခွန်း တစ်ခု ကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ထိုပြင်၎င်း၏ မေးခွန်းအားကုရ်အာန်နှင့်အနွယ်တော်မွန်၏အစေခံရှိက်ခ်ဂျမားလ်ဟိုစိုင်း(န)မာဇင်ဒရာနီဖွခ်ရွလ်လ္လာဟ် အဖာစေလ်အောင်ဝလ်(အိန္ဒိယ)၊ကာရှနစီ(အီရန်)၊ မှ အဖြေပေးကြားခဲ့ပါသည်။ အဗ်နာ စာဖတ် ချစ်ပရိသတ်များ အတွက် အသုံးဝင် တန်ဖိုးရှိမည်ဟု ကျွန်တော်များ အဗ်နာ မှ မျှော်လင့်ပြီး တိုက်ရိုက် ကူးယူ တင်ပြအပ်ပါသည်။
ဟာဂျီ သန်းလှဦး၏ အတွေးမှား များ
ဟာဂျီ သန်းလှဦး၏ အတွေးမှား များ စ္စလမ်သာသနာတော်၏တရားတော်များ: ဂဒီးရေခွမ် ... hajithanhlaoo.blogspot.com/2011/08/blog-post_7431.html by Hajee Than Hla Oo · More by Hajee Than Hla Oo3Aug 2011 – အကြောင်းကတော့ ယူအိုအိုင်ရှိ ရှီအာ မန်ဘာများလွပ်လပ်စွာဆွေးနွေး လို့ရအောင်နှင့် ... ကျွန်တော်အနေဖြင့် အထက်ပါ ဝက်ပလောက် တစ်ခု ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားထားနဲ့ ဖတ်ကြည့်တော့ ရေးသား ထားသူ ဟာဂျီ သန်းလှဦီးဆိုသည် မနူးမနပ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေဖြင့် ဂဒီးရေခွမ်၌ ဟဇ်ရသ်အလီ (ရသွေ့)အား ဝေလာယသ် ပေးအပ်ခြင်းခေါင်းစဉ်ဖြင့် လုံးဝ အမှားများကို ရေးသားထားပါတယ်။